Achọrọ: Technologist Extraordinaire
Ezigbo enyi m na onye ndụmọdụ, Chris Baggott, na-achọ CTO maka ụlọ ọrụ ya, Compendium sọftụwia. Ebe ọ bụ na nke a bụ mmalite, Chris na-achọ itinye ngwugwu na-eme ihe ike nke ga-adọta kpakpando ọ chọrọ. Chris na Ali Sales nwere ọhụhụ dị egwu maka Compendium, ha nwere ego, ma ugbu a, ha chọrọ ịrịdata na bras na-eme ka usoro ahụ wuru.
If you're talented, this can be your ticket. Chris helped grow ExactTarget to Inc 500's fastest growing companies in the country. He's the real deal. For more information and to submit your resume, contact Chris through Compendium's website. Onweghi ndi oru ngo choro - nke a bu otu, onodu oge.
Regwọ Ọrụ Resprụ Ọrụ Dịịrị?
Mee 30, 2007 na 11: 23 PM
Hey Doug. Nke a na-ada ka ihe na-atọ ụtọ ma na-eto eto.
O juru m anya na ị gaghị awụli elu na ohere a ebe ọ bụ na gị na Chris nwere ezigbo ọrụ na mmekọrịta onwe onye.
O yiri ka ọnwa ole na ole gara aga abụwo oge dị ukwuu maka ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite, yabụ na onye ọ bụla nwere nkà ga-awụlikwa elu n'oge a… onye maara, Compendium nwere ike ịbụ nzụta ọzọ site na isi ọkpụkpọ…
Cheedị banyere nhọrọ ngwaahịa 🙂
Mee 31, 2007 na 8: 11 AM
Chris bụ nwoke guzosiri ike na ọ gaghị etinye ihe ọghọm ịdọrọ talent site na ExactTarget maka mbọ nke ya.
Ọzọkwa, echere m na Chris chọrọ onye nwere ezigbo mmemme mmemme ọkachamara. Ọ bụ ezie na m mepụtara professionally, M ọtụtụ ihe ndị ọzọ nke a ngwaahịa njikwa, ịmata azum na ahịa mkpa, mgbe ahụ, na-atụgharị ndị n'ime chọrọ maka mmepe ìgwè. Nke ahụ bụ niche m.
Ana m eziga nke a na blọọgụ m, agbanyeghị, ka netị m nwee ike iru. Chris chọrọ ihe kachasị mma na nke a ma achọrọ m ime ihe niile m nwere ike iji nyere aka na Compendium ịga nke ọma! Nyefee ozi a ma ọ bụrụ na ị maara onye.
Mee 31, 2007 na 7: 36 AM
Daalụ maka post Doug. N'ụzọ dị mwute, m na-abụghị mpi na ExactTarget na-etinye Doug ebe m na-erute.
Onye ziri ezi maka nke a nwere onye ndu, ọhụụ ma na-arụsi ọrụ ike iji mee ka ụlọ ọrụ a nwee ihe ịga nke ọma. Anyị maara ihe anyị chọrọ ka sọftụwia ahụ mee… anyị nwere ndị ahịa na - agbakọ… naanị anyị chọrọ ka otu onye otu aka nri bịa soro ma duzie mbọ teknụzụ anyị.
Jun 1, 2007 na 9:37 AM
Hey ebe Doug - Mụ onwe m nwekwara ntụkwasị obi zuru oke na Chris na mbọ ya, ya na ndị ziri ezi, ga-eme Compendium Software ka ọ bụrụ ezigbo ihe ịga nke ọma maka Chris.
Jun 1, 2007 na 10:02 AM
Chaị! Onye ọzọ nwere ọchụnta ego mpaghara na-eleta saịtị m! Maka ndị gị nke na-ahụbeghị ma ọ bụ nụ anụ ọhịa nnụnnụ na-akparaghị ókè, ụkpụrụ ha bụ “Bringchịkọta mmadụ na ọdịdị ọnụ dị n’azụ ihe niile anyị na - eme.” Ha bụ ụlọ ọrụ dị egwu.
Ha bụ ndị ahịa dị egwu. Ahụtụbeghị m ụlọ ọrụ na-arụ nnukwu ọrụ na ịgwa ndị ahịa ha ihe ma soro ha nwee mmekọrịta. (Nna nna m bụ onye ahịa dị mpako!)
Daalụ maka ịkwụsị site, Marty. Compendium bụ mmalite nke ịde blọgụ! Ọ bụ ezie na ndị folks ndị ọzọ na-arụ nyiwe na ngwa mgbakwunye, ụlọ ọrụ Chris na-arụ ihe ngwọta nke na-eweta ọchụchọ na ọdịnaya ọnụ! Enweghị m ike ịnwale ịnwale ya!